Nabaro - Machadka Indheergaradka Somaliland
Machadka Indheergaradka Somaliland > Nabaro
Machadka Indheergaradka Somaliland (MISO), waa urur aan macaash-doon ahayn, oo ah macad u madax-bannaan danta guud iyo talo bixinta, oo ujeedadiisu tahay inuu wada shaqeyn dhow la yeesho jaamacadaha iyo macaahidda darasaadka, hayadaha dawladda iyo ganacsatadda, ururrada maxaliga ah, dadweynaha iyo weliba xukuumadda — oo dhammaan aaminsan danta ummadda — iyadoo la adeegsanayo goleyaal waxqabad, doodo-furan, is-bahaysi ujeedooyin ku saleysan, iyo falanqeyn waxtarleh, iyadoo hadafka guud yahay sidii loo gaadhsiinayo afkaar cusub, horu-socod iyo barwaaqo dadweynaha Somaliland, Afrika iyo Caalamka oo dhan.
Inuu noqdo Guri Talo oo ku hawlan falanqeynta iyo xallinta arrimaha muhiimka ah ee marwalba ka taagan Somaliland
Inuu noqdo hormood umadda Somaliland kalsooni ku qabaan oo ka hawlgala dhinacyadda ay ka mid yihiin Cilmi-baadhista, Iskaashiga, Waxbarashada, Xidhiidhka Ummadda, Daba-galka iyo Udoodidda.
Noqdo goob waxbarashada guud bixisa tiiyo internetka la adeegsanayo, halkaasoo ummadda Somaliland iyo cidwalba ay ka heli karaan war iyo aqoon ah qoraallo, doodo, muuqaal, iyo maqalba.
Inuu fahansiiso dadweynaha arrimaha siyaasadeed ee maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ahba raadka ay ummadda ku yeelanayaan
Dhiiri-gelinta iyo qabashada Ujeedooyinka cilmi baadhista ee dhinacyada kala gaddisan sida, spanning, daryeelka caafimaad, dhaqaalaha, dawlad-wanaagga iyo waxbarashada
Shuraakada, iskaashiga iyo daabacaadda Jaraa’id cilmi-baadhiseed iyo maxsuulka ka soo baxa cilmi-baadhisyada jaamacaddaha ugu waaweyn Somaliland
Cilmi-baadhis iyo Talooyin ku saabsan Raadinta mudada dheer ee Somaliland raadinaysay Aqoonsi oo aanu siino Wasaaradda Arimaha Dibadda; waxaa intaa dheer waxaanu diiradda saaraynaa kolba arin sannado si aan u xoojino qeybtaas. Tusaale ahaan, waxaanu diirada saaraynaa la’aanshaha Arimaha beeraha, way jirtaa wasaarad u qaabilsan laakiin inta badan ma siiso taxadir ku filan si loo helo maxsuul waxbeerasho taas oo la dayacay keentayna Abaarahan xad-dhaafka ah.
Sheegidda, caddaynta iyo qeybinta siyaasadaha imika jira, soo jeedimaha iyo mashaariicda
Abuuridda shabakado xirfadyahanno, aqoonyahanno, hoggaamiyayaasha bulshada, ururrada sama-falka iyo think tanks-kooda si loo horumariyo iskaashiga, gaadhidda meesha ugu sarraysa ee mabaadi’da daneeyayaasha
Gudbinta fikradaha iyo soo saaridda caqabadaha ee arimaha siyaasadaha;
Qabashada kulamo, aqoon-korodhsiyo, iyo shirar halkaas oo siyaasadaha la soo diyaariyay iyo arimo kale ba lagaga doodo, lagu wadaago ama lagu horumariyo.
Macadku wuxuu qiimeyn doonaa had iyo jeer siyaasadaha guud ee dawladda iyo kuwa gaarka ahba ee la xidhiidha waxaan dawliga ahayn, mashaariicda iyo hindisayaasha cusubba.
Dhiiri-gelin doonaa in mashaaric bixinta iyo xeerdeginta lagu maamulo habdhaqab ka madhan madmadow, ku jirto dhexdhexaadnimo, iyo weliba la xisaabtan.
Ku baaqi doonaa in la xoojiyo mabaadii’da ku saleysan dawlad loo dhan yahay iyo muwaadiniin waxqabad leh
Machadka Indheergaradka Somaliland (MISO) waxaa ka go’an inuu noqdo urur waxtar ku soo kordhiya bulshada caalamka. Macad waxwadaqabsi iyo iskaashi ku salaysan weeyaan. Afkaar cusub iyo horumar muuqdaana waa hamiga macadka.